जताततै कोरोना खोपको चर्चा चलिरहेको बेला रुसी राष्ट्रपती आँफैले फेरि गरे यस्तो घोषणा, विश्वभर खुशीयाली ! – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /International/जताततै कोरोना खोपको चर्चा चलिरहेको बेला रुसी राष्ट्रपती आँफैले फेरि गरे यस्तो घोषणा, विश्वभर खुशीयाली !
काेराेना भा इरसवि रूद्धकाे पहिलाे भ्याक्सिन (खाेप) सार्वजनिक गरेकाे रुसले दोस्रो को रोना भ्याक्सिन पनि तयार पारेको दा बी गरेको छ । यसअघि रुसले ११ अगष्टमा एउटा भ्याक्सिनलाई प्रयोगका लागि स्वीकृति दिइसकेको छ, जसकाे नाम स्पुतनिक भी राखिएकाे छ राखिएकाे छ । उक्त भ्याक्सिनले स्वीकृति पाएको घोषणा गर्दै रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले रुसले विश्वकै पहिलो सफल को रोनाभा इरस भ्याक्सिन तयार गरेको बताएका थिए । तर पनि त्यसका साइड इ फेक्ट देखिएकाे र अन्य देशले विश्वास गरिनसकेकाे अवस्था छ ।
अहिले रुसले अर्को अझ सफल को रोना भ्या क्सिन तयार पारेकाे जनकारी दिएकाे छ, जसमा कुनै सा इड इ फेक्ट नभएकाे बताइन्छ । डेलीमेलका अनुसार रुसकाे पहिलो भ्याक्सिनमा जुन सा इड इ फेक्ट देखिएका थिए, ती सा इड इ फेक्ट दोस्रो भ्याक्सिनमा देखिएकाे छैन । रूसकाे दाेस्राे भ्याक्सिनको नाम ‘इपिभ्याककोरोना’ राखिएको छ । यसको विकास साइबेरियाको वर्ल्ड क्लास भाइरोलोजी इन्स्टिच्युट भेक्टर स्टेट रिसर्च सेन्टर अफ भाइरोलोजी एण्ड बायो टेक्नोलोजीमा गरिएको हो ।
रिपाेर्टका अनुसार याे नयाँ भ्याक्सिन मानिसमा २ डोज दिइनेछ, जुन पहिलो डोजको १४ देखि २१ दिनमा दोस्रो डोज लगाइनेछ । यसै सालकाे अक्टोबरसम्म यो भ्याक्सिनले पनि स्वीकृति पाउने रूसी अधिकारीहरूकाे दाबी छ । डेलीमेलको रिपोर्टअनुसार रुसले आफ्नो पहिलो भ्याक्सिनका जुन साइड इफेक्ट देखिएका थिए ती साइड इफेक्ट दोस्रो भ्याक्सिनमा नभएको पनि दावी गरेको छ । नयाँ भ्याक्सिन लगाउँदा त्यस्ता कुनै पनि साइड इफेक्ट नहुने रुसको दावी छ । रुसले पहिलो कोरोना भ्याक्सिनको नाम स्पुतनिक भी राखेको थियो । रुसी वैज्ञानिकका अनुसार इपिभ्याककोरोना भ्याक्सिनको क्लिनिकल ट्रायल सेप्टेम्बरमा पूरा हुनेछ ।
तर, ट्रायलका क्रममा जुन ५७ स्वयंसेवकहरुलाई भ्याक्सिन लगाइएको थियो उनीहरु कसैले पनि साइड इफेक्टको सामना गर्नु परेन । सबै स्वयंसेवक स्वस्थ छन् र राम्रो महसुस गरिरहेका छन् । पहिले यो इन्स्टिच्युट अत्यन्तै गुप्त जैविक हतियार अनुसन्धान केन्द्र थियो । इपिभ्याककोरोनाको २ डोज दिइनेछ । पहिलो डोजको १४ देखि २१ दिनमा दोस्रो डोज लगाइनेछ । रुसले अक्टोबरसम्म यो भ्याक्सिनले स्वीकृति पाउने अपेक्षा गरेको छ ।
नोभेम्बरसम्म यसको उत्पादन सुरु गरिने अपेक्षा छ । भेक्टर स्टेट रिसर्च सेन्टर भाइरोलोजी एण्ड बायोटेक्नोलोजीले कोरोनाभाइरसका १३ सम्भावित भ्याक्सिनमा काम गरेको थियो । प्रयोगशालामा जनावरहरुमा यी भ्याक्सिनको जाँच गरिएको थियो । रुसले पहिलो कोरोना भ्याक्सिनको नाम स्पुतनिक भी राखेको थियो । अहिले आएको नयाँ भ्याक्सिनको नाम इपिभ्याककोरोना राखिएको छ । अहिलेसम्म चीन, अमेरिका र बेलायतको भ्याक्सिन पनि फेज ३ ट्रायलमा पुगेका छन् ।